Ndege nyowani kubva kuOntario kuenda kuAustin kuSouthwest Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege nyowani kubva kuOntario kuenda kuAustin kuSouthwest Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kuziviswa kwendege nyowani dzekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kunouya sezvo ONT ichiri kuenderera mberi nekuona kunoshamisa denda kupora. MunaAugust, ONT yakataura nezvevatakuri vemigwagwa yaive mukati me7% yematanho e-pre-COVID.
Southwest Airlines inozivisa nendege nyowani kubva kuOntario International Airport kuenda kuAustin, Texas.
Southwest Airlines ichapa zuva nezuva Ontario, California kuenda kuAustin, Texas ndege kubva munaKurume 10, 2022.
Maodzanyemba ekumadokero chiziviso nhau dzinogamuchirwa dzeSouth California gateway uye iyo Inland Empire.
Chiziviso kubva kuSouthwest Airlines chekuti mutakuri wemutengo wakaderera uchabhururuka zuva rega rega kubva kuOntario International Airport (ONT) kuenda kuAustin (AUS) kutanga munaKurume 2022 inhau dzinogamuchirwa kuSouth California gateway uye Inland Empire.
Southwest Airlines ichapa ndege pakati ONT uye Austin-Bergstrom International Airport zuva nezuva pane inotevera purogiramu inoshanda Kurume 10, 2022.
Flt # mavambo Enda kuenda kusvika maitikiro ndege
1204 ONT aus 10: 55 am 3: 35 pm Mon - Tue &
1739 aus ONT 4: 35 pm 5: 55 pm Mon - Tue &
Ndege nyowani dziripo dzekubhuka ipapo
"Kuwedzerwa kweguta guru reTexas kumepu yedu yemigwagwa inhau dzinogamuchirwa uyezve chiratidzo chekutenda nemutakuri mukuru wevatambi veOTT," akadaro Alan D. Wapner, Mutungamiri weOIAA Board of Commissioners. "Ichiwo chimwe chiratidzo chekuti kupora kweOont kubva padenda reCVV-19 kuri kuitika uye kuri kuwedzera."
Ontario International Airport (ONT) maererano ne Global Traveler, bhuku rinotungamira kune vanogara vachibhururuka nendege. Inowanikwa muInland Empire, ONT ingangoita mamaira makumi matatu nemashanu kumabvazuva kwedhorobha reLos Angeles pakati peSouthern California. Iyo izere-sevhisi yendege iyo, pamberi pekoronavirus denda, yakapa isingamire yekutengesa jeti sevhisi kune 35 mikuru nhandare muUS, Mexico neTaiwan.
Southwest Airlines Co., inowanzozivikanwa seSouthwest, ndeimwe yendege huru dzeUnited States uye nendege huru pasi rose inodhura. Inotungamirwa muDallas, Texas uye yakaronga sevhisi kunzvimbo 121 muUnited States nedzimwe nyika gumi dzekuwedzera.